हुने भयो उइघुरहरूमाथि दुर्व्यवहारको अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रकाशित, चीनमा मच्चियो खैलाबैला ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय हुने भयो उइघुरहरूमाथि दुर्व्यवहारको अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रकाशित, चीनमा मच्चियो खैलाबैला !
हुने भयो उइघुरहरूमाथि दुर्व्यवहारको अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रकाशित, चीनमा मच्चियो खैलाबैला !
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले चीनको सिनजियाङ क्षेत्रको अवस्थाको मूल्याङ्कनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भईरहेको एक प्रवक्ताले शुक्रबार भने । उक्जत क्हाँषेत्रमा उइगरहरूलाई गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको, दुर्व्यवहार गरेको र काम गर्न बाध्य पारिएको आरोप छ रहेको छ ।
रुपर्ट कोल्भिलले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारका लागि उच्चायुक्तको कार्यालय मिशेल ब्याचेलेटले आगामी हप्ताहरूमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने आशा राखेको छ र प्रस्तावित भ्रमणमा चिनियाँ अधिकारीहरूसँग लामो समयदेखि चलिरहेको वार्तामा “कुनै ठोस प्रगति” नभएको बताए ।
यसअघि शुक्रबार, वकिल र अभियानकर्ताहरूको एक अनौपचारिक बेलायतमा आधारित न्यायाधिकरणले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र सिन्जियाङ क्षेत्रमा उइगर र अन्य अल्पसंख्यकहरूको यातनाको लागि प्राथमिक जिम्मेवारी बोकेको बताए। चीनले ट्रिब्युनललाई खारेज गर्‍यो, जसमा अनुमोदन वा कार्यान्वयनको कुनै शक्ति छैन, “प्रहसन” को रूपमा।
कोलभिलले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको ब्रीफिङमा भने, “उइघुर न्यायाधिकरणले सिनजियाङमा उइघुर र अन्य मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यकहरूसँगको व्यवहारको सम्बन्धमा गहिरो चिन्ताजनक थप जानकारी प्रकाशमा ल्याएको छ।”
“हामीले पक्कै पनि संस्थाहरूमा स्वेच्छाचारी नजरबन्द र दुर्व्यवहार, जबरजस्ती श्रम अभ्यास र सामान्यतया सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको क्षयको ढाँचाहरू पहिचान गरेका छौं,” उनले भने।
जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रका लागि चीनको नियोगले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि उसले ब्याचेलेटलाई “मैत्रीपूर्ण भ्रमण” को लागि बारम्बार निमन्त्रणा दिएको छ।
“यद्यपि, यो भ्रमण कुनै पनि हालतमा अपराधको अनुमानमा तथाकथित ‘अनुसन्धान’ बन्न सक्दैन,” यसले भन्यो।
यदि उनको कार्यालयले “अमेरिका र पश्चिममा चीन विरोधी शक्तिहरूको राजनीतिक हेरफेर” मा मात्र चासो राखेको थियो भने यसले यसको निष्पक्षतामा गम्भीर शंका उत्पन्न गर्नेछ, यसले थपे।
जुनमा, ब्याचेलेटले सार्वजनिक रूपमा यस वर्ष भ्रमणको लागि समयरेखा सुझाव दिए। उनले सेप्टेम्बर 2018 देखि यस्तो भ्रमणको सर्तहरू वार्ता गरिरहेकी छिन्, जब पहिलो पटक आरोपहरू देखा पर्‍यो कि करिब १० लाख उइघुरहरूलाई सामूहिक शिविरहरूमा हिरासतमा राखिएको थियो।
उनको खोजहरू बेइजिङ सरकारसँग साझा गर्न आवश्यक छ उनीहरूलाई सार्वजनिक गर्नु अघि, कोलभिलले भने, उनले आशा गरे कि यो हप्ताको कुरा हुनेछ।
Previous articleअमेरिकाले चीन, म्यानमार र उत्तर कोरियामाथि मानवअधिकार प्रतिबन्ध लगाएको छ
Next articleभुटानको साकतेङ राष्ट्रिय निकुञ्जमाथि चीनको गिद्दे नजर !